विरामी बुवा भेट्न भारतवाट छोरी आएको घरका १४ सहित २२ जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि नगर नै सिल गरियो – Dainik Sangalo
August 4, 2020 714
काठमाडौं । दिनहुँ बढिरहेको कोरोना संक्रमितको संख्याले सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाएको छ । फेरी मोरङको रंगेली नगरपालिकामा एकै परिवारमा २४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । एउटै घरका १४ सहित २२ जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि सोमबार राति १२ बजेदेखि अनिश्चितकालका लागि सिल गरिएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोम प्रसाद सुवेदीले ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित फेला परेपछि सिल गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार संक्रमितहरु धेरै जनाको सम्पर्कमा भएको जानकारी प्राप्त भएकाले उनीहरुको पनि परिक्षण गर्नका लागि नगर क्षेत्र सिल गरिएको हो।
‘एकै परिवारका १४ जनासहित २२ जनामा कोरोना देखिएको सोमबार राति १२ बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि नगर क्षेत्र सिल गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ ।
१४ जना संक्रमित भेटिएको परिवारमा एक महिला (छोरी)भारतबाट आएको खुलेको छ । उनीवाटै अरुलाई पनि कोरोना सरेको हुनसक्ने अनुमानका साथ परिक्षण गरिएको छ ।
बुबा बिरामी परेपछि ती युवती भेट्नका लागि दिल्लीबाट नेपाल आएकी थिइन्। उनी भारतवाट आएपछि बृद्ध बुवाको पनि निधन भएको छ । उनी अन्तिम संस्कारमा सहभागी भएकी थिइन् । अन्तिम संस्कारमा छिमेकी र आफन्त पनि सहभागी भएको बताइएको छ । बृद्धको अन्तिम संस्कारमा सहभागी भएका परिवारका सदस्य र केही गाउँलेमा पनि कोरोना देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
‘संक्रमितहरु धेरै जनाको सम्पर्कमा आएका कारण उनीहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुको पनि स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले कहिले सम्म सिल गर्ने भन्ने निर्णय अहिले भइसकेको छैन । अवस्था हेरेर सिल खुला गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने प्रशासनले जनाएको छ ।
Prevभावुक बन्दै प्रकाश सपुत र केकी अधिकारीले सुनाए ‘बदला बरिलै’ को भित्री कथा ! रे’प सिनमा यस्तो भो! (भिडियो सहित)
“हेलम्बुका २ सय बाढी पिडित,लाई श्वेताले गरिन् खाना पकाउने ग्याससहित,खाद्यान्न सामाग्री, वितरण”
४ बर्षिय छोरी आशिफा पैशा अभावले मृत्युसँग लड्दै , सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहोस् सकिदैन भने सहयोगी मनसम्म पुराउन शेयर गर्नुहोस्
चर्चित हाँस्य कलाकार अर्जुन घिमिरे (पाँडे) को आज जन्मदिन,शुभकामना थाप्न भ्याई नभ्याई
कतारबाट ३०१ नेपाली स्वदेश फिर्ता